Fiofanana andiany faha 16 ho an’ny mpampiofana mpanampy - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Nanao ny lasim-piofanana nasionaly teto Fianarantsoa ny Antilin’ i Madagasikara (A.I.M.), ny 14 hatramin’ny 22 desambra 2020. Mpampiantrano ny Kianjan’ny tanora Joany Paoly II, eo Tsianolondroa. Avy amin’ny Diosezy 12 eto Madagasikara izy ireo. Natao izany ho fampiofanana ireo mpampiofana mpanampy eo anivon’ny A.I.M. Zava-dehibe amin’ny Fiangonana ny fanabeazana, hoy i Mompera Andry Arsène, ray am-panahin’ny Antilin’i Madagasikara, Diosezin’i Fianarantsoa. Miseho amin’ny endrika samihafa izany ka ao anatiny ny fikambanana masina, toy ny A.I.M. Misy mitsikera anefa ity fikambanana ity fa hoe: tsy ampy fanabeazana ny ankizy sy ny tanora ao aminy. Fanamby lehibe apetraky ny fikambanana aorian’izao fiofanana izao, hoy hatrany i Mompera, ny hampianatra sy hampiofana ny tanora mpikambana. Izany no atao dia mba ho fanatsarana ny fanabeazana ao amin’ny A.I.M, indrindra ny lafiny ara-pinoana.
Nohamafisin-dRasamoely Nestor Alphonse, lehiben’ny tari-piofanana nasionaly A.I.M fantatra amin’ny anarana maha Skoto hoe: “Faucon”, fa hanofana sy hanao tantsoroka ny tompon’andraikitra isam-pivondronana any amin’ny Paroasy izy ireo aorian’ny fiofanana. Natao izany satria misahana mivantana ny fitaizana ny ankizy sy ny tanora araka ny fanabeazana Skoto ny mpiandraikitra ao amin’ny A.I.M eny anivon’ny Paroasy. Tsy vitan’izany fa mbola iantsorohany ihany koa ny fiantoana sy ny fikajiana ary ny fitehirizana ny fomba fanabezana maha Antily ny Antily. Manaraka ny fenitra iraisana sy iombonana amin’ny Skoto maneran-tany rahateo koa izany. Niavaka nandritra ny fiofanana ny fanamafisana ny fankatoavana ireo fifampifehezana ao anatin’ny fikambanana sy ny fanentanana ny mba hisian’ny fampandraisana anjara hatrany ifotony isam-pivondronana. Eo ihany koa ny famerenana amin’ny laoniny ny fifankatiavana ara-pirahalahiana amin’ny samy mpikambana.
“Nampitombo bebe kokoa hatrany ny fifantohana amin’ny fiainana maha A.I.M ny fiofanana azo”, hoy ny mpikambana A.I.M iray, efa 35 nikatrohana, avy amin’ny Diosezin’Antananarivo. Manampy amin’ny fanatevenana ny fanabeazana ny zandry zanaka beazina mba ahafahan’izy ireo mikolo mandrakariva ny fomba fanao maha A.I.M. Hampirisika ny fiainana bebe kokoa ny fifampifehezana sy ny fifankatiavana. Voarainy nandritra ny fiofanana ihany koa ny fanatsarana ny fanomezana anarana mampiavaka ny mpiandraikitra, izay nalaina avy amin’ny zava-boahary. Efa fomba amam-panaon’ny Antily izany sady iombonany amin’ny Skoto maneran-tany. Nisy mpiandraikitra tsy dia nankasitraka loatra io fomba io manko ka lasa nitarika ny fihemorany tao anaty fikambanana. Nahatratra 37 mianadahy ny mpiofana tonga. Nanatrika io lasin’asa io koa ny filohan’ny tari-piofanana nasionaly, Jaonarana Eric. Antenaina ho tafapaka any amin’ny isan-tsampana ny vokatra azo nandritra ny fiofanana. Hitondra vokatra tsara amin’ny fanabeazana ny solofo sy dimby zanaky ny Eglizy sy ny tanindrazana.
EPP ao Talata Ampano : Nanokafana ny fizarana arona akanjo ho an’ny mpianatra sy mpampianatra - il y a 22 jours
Fampianarana sy fanabeazana : Maharary ny herisetra any an-tsekoly - il y a 1 moi